Umlando weMatroshka, unodoli waseRussia | Ukuhamba kwe-Absolut
Umlando weMatroshka, unodoli waseRussia
Uma singazibuza ukuthi yisiphi isikhumbuzo esijwayelekile esingahamba naso ekhaya ngemuva kohambo eRussia, impela iningi lethu belingaphendula ngaphandle kokungabaza ukuthi inkumbulo enhle kakhulu i-matrioshka.
Ingenye yamathoyizi athandwa kakhulu emhlabeni, ozoyikhomba kalula noma ungakaze uvakashele iRussia phambilini. Eqinisweni, udumo lwabo luthi ama-matrioshkas aze abe uphawu lokuhlobisa nolwemfashini. Ngaphezu kwalokho, ungahle ube nematriki ekhaya futhi awusakhumbuli ukuthi uyithathephi.
Ama-matrioshkas anemvelaphi yokufuna ukwazi futhi anencazelo enkulu kubantu baseRussia lapho bewamukela njengezipho. Uma uhlale uzibuze ukuthi uyini umlando waleli thoyizi, ukuthi livelaphi igama lalo nokuthi limeleni, awukwazi ukuphuthelwa yilo mbhalo lapho ngizophendula khona yonke le mibuzo.
1 Yini ama-matrioshkas?
2 Amelelani ama-matrioshkas?
3 Enziwa kanjani ama-matrioshkas?
4 Igama elithi matrioshka livelaphi?
5 Yini ukufanekiswa kwe-matrioshkas?
6 Uyini umlando we-matrioshkas?
7 Imyuziyamu yaseMoscow Matryoshka
8 Nikeza i-matrioshka
Bangonodoli bokhuni abagcina ukuziphindaphinda kwabo ngosayizi abahlukahlukene.. Ngokuya ngosayizi kamama we-matrioshka, ngaphakathi singathola phakathi kokungenani okuyisihlanu kanye nokufika kuma-matrioshkas angamashumi amabili, ngayinye incane kunale eyedlule. Kuyamangalisa!
Ama-matrioshka amele abesifazane baseRussia abampofu futhi ayisithonjana samasiko ezwe.
Enziwa kanjani ama-matrioshkas?
Ukwenza i-matrioshkas, izinkuni ezisetshenziswa kakhulu yilezo ezivela e-alder, balsa noma birch, yize mhlawumbe izinkuni ezisetshenziswa kakhulu yi-linden.
Lezi zihlahla zigawulwa ngo-Ephreli, okuyilapho zigcwele khona kakhulu ubisi, kanti izingodo zivulwa umoya okungenani iminyaka emibili ngokugcoba emaphethelweni azo ngosawoti ukuvimbela izinkuni ukuthi zingabhidliki.
Lapho sebekulungele, ababazi basika ubude obufanele bese bebathumela e-workshop ukuyosebenza izinkuni ngezigaba eziyi-15. I-matrioshka yokuqala eyenziwe ihlale incane kakhulu.
Igama elithi matrioshka livelaphi?
Igama laleli thoyizi livela ku- «Matriona», enye yezinto ezaziwa kakhulu eRussia yasendulo, nayo evela kuLatin «mater» okusho ukuthi umama. Kamuva igama elithi "Matriona" laguqulelwa kumatrioshka ukuqoka lo nodoli. Amanye amagama asetshenziselwa ukubhekisa kumatrioshka amagama afana ne-mamushka ne-babushka.
Yini ukufanekiswa kwe-matrioshkas?
Ama-matrioshkas aseRussia akhombisa ukuzala, ukuba ngumama kanye nokuphila okuphakade. Lokho kusho ukuthi, umndeni omkhulu futhi ohlangene lapho umama ezala khona indodakazi, lokhu kumzukulu wakhe, yena kumzukulu wakhe nokunye kuze kube umele izwe elingapheli.
Ekuqaleni, kwakudwetshwa onodoli besifazane kuphela, kodwa kamuva izibalo zabesilisa zaphinde zenziwa ukuze kuqedelwe umndeni bese kuthi zimelele ezinye izindinganiso ezifana nobuzalwane phakathi kwabafowethu. Ngokuhamba kwesikhathi, baqala nokwenza ama-matrioshkas aseRussia amele izibalo zomlando noma zemibhalo.
Uyini umlando we-matrioshkas?
Kuthiwa ekupheleni kwekhulu le-XNUMX, umthengisi waseRussia nomsizi wakhe uSavva Mamontov bathatha uhambo oluya eJapane lapho avakashela khona umbukiso wobuciko lapho afunda khona ngesandulela sama-matrioshkas. Kwakuwumfanekiso wonkulunkulu abayisikhombisa ababengomunye ngaphakathi komunye kunguFukurokuju (unkulunkulu wenjabulo nokuhlakanipha) omdala kanye nowayequkethe abanye onkulunkulu.
UMamontov wagcina lo mbono futhi lapho ebuyela eRussia wawethula kumdwebi kanye nojika uSergei Maliutin ukuze enze inguqulo yakhe yesiqephu saseJapan. Ngale ndlela, kudalwe unodoli omele umlimi ojabulayo waseRussia owamukela yonke inzalo yakhe.
Leli thoyizi lidale ukuheha embukisweni we-1900 Paris World's Fair, lapho laqhubeka khona lazuza indondo yethusi, futhi Amafektri asheshe aqala ukuvela eRussia akhiqiza i-matryoshka edayiswa ezweni lonke naseNtshonalanga. Ngale ndlela isibe yisithonjana sesiko laseRussia kanye nesikhumbuzo esimele kakhulu izwe. Ingcweti ngayinye ibaza onodoli bayo bese iba amathoyizi enani elikhulu ngoba kwesinye isikhathi ayizinto zabaqoqi.
Imyuziyamu yaseMoscow Matryoshka
Eqinisweni, zibaluleke kakhulu ukuthi ngo-2001 yavulwa eMoscow, umnyuziyamu waseMarryoshka wokwazisa ngomlando walawa mathoyisi nokuvela kwawo ngokuhamba kwesikhathi.
Lo mnyuziyamu ukhombisa amanye ama-matrioshkas okuqala aseRussia adalwe ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX nokuthi umklamo wawo washintsha kanjani eminyakeni edlule.
Isibonelo, ngeminyaka yo-1920 amaBolshevik matrioshkas ayemele isigaba sabasebenzi ngisho isibalo se- "kulak" (igama elalisetshenziswa ngokujwayela ukubhekisa kubalimi abacebile) saphinde sakhiqizwa sigqoke ikepisi futhi izingalo zawela isisu esikhulu.
Ngesikhathi se-USSR, uhulumeni wayefuna ukuhlanganisa ubuzwe bamazwe aseSoviet kumatrioshka nasezizweni ezahlukahlukene ezinjengeBelarusian, i-Ukraine, iRussia, njll. Ngisho nomjaho wasemkhathini, iqoqo elikhulu lonodoli be-astronaut nalo lenziwa ngesudi yabo yokuntywila kanye ne-rocket yasemkhathini.
Ngemuva kokuphela kwe-USSR, indikimba yama-matrioshkas ahlukahlukene kanye nosopolitiki abadumile nosaziwayo abahlukahlukene bamazwe aqala ukumelwa.
Ukuthatha uhambo lokuqoqa iqoqo kuyathakazelisa ukuqhathanisa ama-matrioshkas endabuko kakhulu nalawo anamuhla kakhulu. kanye nezibalo zaseJapan ze-dio Fukuruma ezibakhuthazile. Umnyuziyamu ukhombisa nomehluko phakathi kwe-matryoshka evela ezifundeni ezahlukahlukene zaseRussia futhi unikezela ngolwazi ngempilo nemisebenzi yabasebenzi bezingcweti nabadwebi baseRussia abaphambili.
KwabaseRussia kunencazelo enkulu ukunikeza i-matryoshka. Lapho othile ethola eyodwa yalezi zidoli njengesipho, kufanele bavule i-matrioshka yokuqala bese benza isifiso. Uma sekugcwalisekile, ungavula unodoli wesibili bese wenza esinye isifiso esisha. Ngakho-ke kuze kufinyelelwe i-matryoshka yokugcina neyincane kunazo zonke.
Uma wonke ama-matrioshkas esevuliwe, noma ngubani owathola lesi sipho kumele asinikeze isizukulwane njengophawu lokuthi bandiza esidlekeni. Ekuqaleni lokhu kwakwenziwa ngabesifazane. Yibo kuphela ababephethe la makhaya futhi bangenza izifiso zokuthi ekugcineni bahambise ama-matrioshka ezinganeni zabo.
Kungakho uma umuntu ekunika i-matrioshka, Ngokwesiko laseRussia ukuthi ukukunikeza uthando nothando ngendlela yethoyizi.
Uma, ngakolunye uhlangothi, kunguwe ozonikeza i-matryoshka njengesipho, ngaphezu kokuletha le mininingwane, into engcono kakhulu ongayenza ukutshela umamukeli incazelo nomlando wesipho manje njengoba wazi it. Ngale ndlela, uzosazisa kakhulu lesi sipho futhi azokwazi ukuthi enzeni nge-matryoshka yakamuva nencane kunazo zonke.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Umlando weMatroshka, unodoli waseRussia
Imidlalo nezemidlalo eGibhithe lasendulo
Abalingisi beBest Bollywood